Akụkọ - Ọzọ! Ebupụrụ Mechanics Binuo na JAPAN
Ọzọ! Ebupụrụ Mechanics Binuo na JAPAN
N'oge na-adịbeghị anya, Binuo Mechanics bupụrụ otu ihe ndọta na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide na-agbanwe ikuku compressor n'ụlọ ọrụ na-ahazi nri dị na Japan, a nabatakwara skru air compressor ma tinye ya na mmepụta.
N'afọ 2020, Binuo Mechanics rụkọrọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ahazi nri na Japan, wee bupụ ha otu setịpụ ihe ndọta na-adịgide adịgide na-agbanwe agbanwe ikuku ikuku. Onye ahịa ahụ nwere afọ ojuju ma mara nke ọma na arụmọrụ dị mma na ịdị elu nke akụrụngwa. Ya mere, ha họọrọ Binuo Mechnics wee nye iwu ọzọ n'August 2021.
N'ime usoro mmepụta nri, anyị ga-enye ebe ikuku dị mma maka iwepụ ihe ize ndụ zoro ezo nke mmetọ nri bụ isi, na ikuku compressor na tank nchekwa ikuku bụ ngwá ọrụ dị mkpa.
Binuo Mechanics malitere itinye aka na ahịa na ọrụ mmezi nke ikuku compressors na akụrụngwa na-arụ ọrụ na 2014. Ugbu a, anyị nwere otu ndị na-ere ahịa tozuru okè na ndị ọrụ ọrụ mgbe-ahịa. 7 * 24 na-eje ozi maka ndị ahịa ụwa. Anyị na-ekwusi ike na nkwenye ọrụ nke aha mbụ, ndị ahịa mbụ, àgwà mbụ, nkà na ụzụ mbụ na ọrụ mbụ, ma na-atụ anya ka anyị na ndị ahịa na-eto eto na ụlọ ọrụ nhazi nri.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na mmepụta nitrogen / oxygen PSA, ikuku ikuku na akụrụngwa, biko gaa na webụsaịtị anyị ka ịmata ọdịnaya dị mkpa wee hapụ ozi gị na ozi kọntaktị. Anyị ga-eji ezi obi na-ejere gị ozi.
Holtec Nitrogen Generator, Ọgbọ ike hydrogen, Atlas Copco Ngp, Psa Nitrogen, Psa Nitrogen osisi, Hydrogen na Oxygen Generator,